Sida uu al-Shabaab u beddelay xeerarka Sakada
Sakada waa tiirka saddexaad ee arkaanta Islaamka, waxaana qofka kari karo looga baahan yahay in uu bixiyo 2.5% hantida uu leeyahay sannadkiiba hal mar. Waxaa loogu talo galay dadka saboolka ah si loo yareeyo saboolnimada.
Qofka wuxuu ku khasbanaanayaa inuu bixiyo sakada markii hantidiisa ay gaarto Nisaab, oo ah hantida ugu yar ee qofka uu ka bixin karo sakada.
Laakiinse ururka argaggixisada ah ee al-Shabaab wuxuu beeniyay xeerarka sakada loo dejiyay. Sakada waxaa loogu talo galay in si toos ah loo siiyo dadka saboolka ah oo ayna baxshaan dadka leh ee hantidooda gaartay Nisaab. Ururka wuxuu Sakada ka qaadaa dadka saboolka ah ee iyaguba u baahan sako. Wuxuu si khasab ah uga uruuriyaa xoolahooda iyo lacagahooda.
Isla dadkii loogu talo galay inay sakada iyaguba qaataan ama la siiyo ayuu ururka ka qaadaa sako aan sharci ku dhisneyn. Ciddii diiddo inay sakada bixiso, inta badan waxaa loo soo diraa xubno ka tirsan ururka si ay u ciqaabaan.
Ururka wuxuu waddooyinka u istaagaa baabuurta wadda badeecooyinka loogu talo galay gargaarka banii’aadannimo ee samafalka ah ee loo wado goobaha ay ka jiraan macaluusha iyo abaaraha daran si ay u canshuuraan. Haddii aysan bixini waayaanna isla goobtaas ayaa lagu gubaa baabuurtaas macala alaabtii ay wadeen.
Ururka wuxuu sidoo kale keenay sako cusub oo aan sharci ku dhisneyn oo la yiraahdo Infaaq. Wuxuu sako isugu jiraan xoolo iyo lacag ka uruuriyaa xitaa dadkii hadda ka hor bixiyay sakadooda. Sakada uu ururka ugu yeero infaaq, wuxuu dadka ka uruuriyaa xilliyada uu dhaqaale la’aanta yahay taasoo tusineyso in mar Allaale marka uu u baahan yahay dhaqaale, uu sharciyada diinta iska beddeli karo.